Ao Venezoela, Tantara Tsangana (Teatra) Atao Ho Fitaovana Iray Entina Hanoherana · Global Voices teny Malagasy
Ao Venezoela, Tantara Tsangana (Teatra) Atao Ho Fitaovana Iray Entina Hanoherana
Voadika ny 13 Aogositra 2017 4:13 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, English, русский, Français, Português, čeština , Español
Ana Gabriela Melo (eo afovoany) miaraka amin'ireo mpilalao ny “Lasopy Sokatra”, izay ahitana taratra ny maha-venezoeliana, ny fihetsiketsehan'ireo sesitany, ireo fivezivezena amin'ny fiainana andavanandro tsy mitsahatra na miaraka amin'ireo krizy nasionaly na vokatry ny sesitany. Sary nampiasaina nahazoana alalana.
Ny teatra, toy ny hetsika ara-kolontsaina hafa sy misy famoronana ao Venezoela, hita ho sady miatrika ny krizy nasionaly ankehitriny no fitaratra itarafana azy koa. Miditra ao anatin'ireo seha-piainana rehetra an'ireo venezoeliana ireo fahasarotana iainana eny an-dalambe ary matetika no ampiasaina mba hamoronana ahiahy ao anatin'ireo zotra mampivondrona ireo orinasa sy ireo vondrona teatra eo amin'ny firenena.
Toy izany koa ny famokarana, ny fikarakarana sy ny fampiakarana an-tsehatra ireo tantara, ary koa ny fiandrasana ireo mpilalao, mpandrindra an-tsehatra ary ireo fikambanana mifandray amin'ny teatra, dia mampiseho fa ady sy tolona ny fanomezana aina ny fampisehoana iray. Ary koa, maro amin'ireo orinasa mikasika ny teatra izay manohy ny asany eo amin'ny firenena no manakambana ireo heriny ao ambanin'ny tenifototra #TeatroDeLaResistencia [#TeatraNyFanoherana].
Ny Global Voices dia nitafatafa tamin'i Ana Melo, iray amin'ireo solontena mavitrika indrindra amin'ireo sehatrasan'i Caracas, mba hahafahana mahatakatra ireo risipo ao anatin'ny tontolon'ny krizy ao Venezoela. Ny teatran'ny fanoherana, araka ny soritan'ilay mpanoratra sady mpilalao, dia teatra iray mandà ny ho faty, na eo aza ny fifanoherana rehetra misy ary mikofoka miady amin'ireo olana goavana ara-moraly sy maha-olona. Ho an'i Melo, asa iray toa tsy ilaina akory eo imason'ireo olona maro ny teatra ao Venezoela:
Misy ireo olona mieritreritra fa tsy misy dikany izay atao. (…) Mieritreritra izy ireo fa ny fanoherana izay misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina dia avy eny an-dalambe fa tsy avy eny ambony sehatra. Na izany aza, mijaly noho ny tsyfisian'ny fahatoisantena amin'ny asan'izy ireo koa ireo mpilalao. Manafotra amin-kery ny saina sy ny tontolo iainan'ireo mpilalao ireo fanontaniana toy ny hoe inona no ilàna ny fanaovana an'io na ilaina ve ny teatra ao anatin'ny firenena iray miatrika ny krizy henjana indrindra eo amin'ny tantarany.
Tsapako fa amin'ny lafiny iray misy koa ny fitondrantena miaro aretin-tsaina. Ny hevitra no mahery indrindra, ary izay no tianay hoampitaina. Misy ny filàna mifandray izay tsy lefitrao, noho ny tsy firaharahàna, ary na ny krizy koa aza. Ny adiko dia izao, na eo aza ireo diabe sy ireo krizy, dia ny hanohy hanome risipo ireo vondron'ireo mpilalao sy hamelona ny antso niantsoana anay.
Ho an'i Ana Melo, “mifandray betsaka kokoa amin'ny maha-izy azy ny venezoeliana ny teatra mihoatra noho ny lafiny ara-politika”, ary mivelona amin'izay mitranga rehetra manodidina azy, amin'ireo tantara izay lasa ho tantarany indray avy eo.
Toy ny hery roa mifanohitra miara-mitoetra sady sarotra folahina: ankilany misy sahala amin'ny endrika fahadisoam-panantenana, fihetsehampo manontany hoe fa nahoana no manao an'io. Etsy andaniny kosa, misy fanaovana be loha be fotsiny, izay toy ny mandeha ho azy: izaho, nataoko foana io nandritra ny fiainako manontolo. Raha misy fampisehoana, handeha aho, teboka.
Fa, ao anatin'io olana manodidina ny lanjan'ny asa koltoraly anaty toe-draharaha nasionaly io, inona no risipo mampitoetra anatin'ireo mahery fo izay mbola manapaka hevitra ny hanohy hampiseho asa teatraly ao Venezoela?
Antoka omen'i Ana Melo ny hoe ao anatin'io fotoana fohy io aorian'ny fampisehoana asaio ny valisoa, ka amin'izay no ilazan'ny olona iray aminao hoe nahatonga azy hisaintsaina ny tantara izay notantaraina sy nolalaovina. Araka izany, ny valisoa dia ny fahalalana fa tafita ny hafatra, mba hijanona hihodina ao anaty loha iray na maromaro, ary amin'ny lafiny iray hafa, ahiahy iray, tazonin'ny olona iray mandritra ny fotoana iray, mivoaka, maka toerana sady miova any anatin'ireny ahiahy hafa izay naseho ireny. Niaina io ahiahy io ry zareo ary nibodo ho tompony.
[Ao anatin'ny asa famoronana] misy fanaintainana ao afovoany ao. Misy zavatra izay tena mampijaly mafy. Zavatra izay teraka avy amin'ny alalan'ny fanaintainana. Amin'izay heviny izay, somary dingana saropady kely io, nefa feno tsirony ihany koa. Manomboka hatreo, ny olona izay milaza fa nahita ilay tantara ka nampisaina azy izany, midika izay fa nisy fiantraikany tamin'ny fomba hafa tao. Io no tena valisoa amiko.
Mety ho lasa asa iray makadiry ny teatra ary mampaharary rehefa vao tapitra. Vantany vao tonga eo an-tsehatra ny tantara iray, mankarary ny mamela azy ho lasa. Na izany aza anefa, misy foana ireo lohahevitra mila resahana, ary dia miverina indray ny rehetra… Tena efa mila hitovy amin'ny famaizana grika. Endrika iray ahafahanao miatrika ny rehetra mitranga ny teatra, mametraka azy anaty fitantavànana iray, mitsako sy mandevona azy amin'ny fomba fijery hafa. Mampifandray anao amin'ny fihetsehampo io, ahafahanao mahatakatra ny fihetsehampo io, manontany tena ianao.
Ho an'i Melo, ny valisoa dia avy amin'ny fanoherana ihany koa ka na ny kanto izay nanomboka taby amin'izay nipoirany aza dia misy fifandraisana amin'ireo zavamisy ara-politika, ary hisy sady hanohitra raha mbola misy foana ireo orinasa sy hetsika sosialy mavitrika hampiroborobo azy. Amin'ny dikany hafa, raha mbola misy fiainana, dia mbola hisy hatrany ny teatra izay hanandrana handika ny traikefa maha-olona ho asa misy endrika kanto, ilaina amin'ny fanamaivanana sy mba hanairana ny fahatsiarovantena.